Video:-Soomaaliya iyo Kenya oo kala saxiixday heshiisyo muhiim ah – Idil News
Video:-Soomaaliya iyo Kenya oo kala saxiixday heshiisyo muhiim ah
Hadalkan ayuu ka sheegay shir jaraa’id oo ay si wada jir ah u qabteen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed cabdullaahi Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku joogo Kenya.
“Waxaan amar ku siinay mas’uuliyiinta ammaanka ee labadeena dal inay si deg deg ah u kulmaan kuna heshiiyaan qaabkii ay u dib ugu billaabi lahaayeen duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi iyadoo duulimaadka ugu horreeyana aan fileyno laba isbuuc gudahood”, ayuu yiri Kenyatta.
“Waa in meesha laga saaro joojinta diyaaradaha Muqdisho ka baxa ee Nairobi u socda kuwaasoo lagu hakiyo Wajeer balse waa in laga shaqeeyo ammaanka labada garoon Muqdisho iyo Jomo Kenyatta, ka hor inta aan arrintaasi la hirgelinin” ,ayey tiri wasiirka arrimaha dibedda Aamina Maxamed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweeyay go’aankaasi isagoo sheegay in rajeynayo inuu dhaqangalo laba isbuuc ka dib.
Muddo 30 mlamaood gudahood ayaa dib loo furi doonaa marinada xadka labada dal ee Beled-xaawo—Mandheera iyo Libooy—Doobley.
Kullankan oo ay marti gelinayso Kenya waxaa lagu eegi doonaa xaaladda abaarta iyo sidii wax looga qaban lahaa, arrinta qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya doonayso in ay dib ugu celiso Soomaaliya, Xaaladda ammaanka, iyo dabcan taageerada IGAD ee kullanka Soomaalida ee lagu qaban doono London bisha May ee soo socota,
Qodobada lagu heshiiyay ee ay kala saxiixdeen labada Madaxweyne oo aan idin soo koobnay ayaa kala ah:-
6. In dib loo soo nooleeyo Guddiga Wadajirka ah ee Iskaashiga (JCC) halkaasna ay labada dowladood uga shaqeeyaan dhammaan howlaha ka dhaxeey,hoos ka daawo muuqaalka.
Be the first to comment on "Video:-Soomaaliya iyo Kenya oo kala saxiixday heshiisyo muhiim ah"